Archive du 20161130
Ra mandriaka tany Tsiroanomandidy Olona 23 matin�ny dahalo, omby 400 najifa
Tsy vaovao amin�ny rehetra intsony ny fahenoana asan-dahalo sy fanafihan-jiolahy etsy sy eroa, saingy tsy mba mahataitra ny fitondram-panjakana izany.
Claudine A&C Miafina eny Iavoloha ?
Mivoatra ny raharaha kolikoly goavana tany Ambohimahamasina, Ambalavao.
Nosy eparsa Misy 500 miliara dolara miotrika
Maherin�ny 500 miliara dolara USD ny totaliben�ireo harena miotrika ao amin�ireo nosy manodidina antsika na ny nosy eparsa, raha ny fampitam-baovao azo avy amin�ny fiombonamben�ny ampanjaka izay mitaky ny famerenana ireo nosy manodidina antsika.
PND an-dRajaonarimampianina Mbola hikarohana 3,4 miliara dolara
Handresy lahatra ireo mpamatsy vola mahazatra sy mpanambola tsy miankina manomboka rahampitso voalohan�ny volana desambra ao Paris ny delegasionina mafonja tarihan�ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ahitana minisitra 13 be izao
Tanora TIM Mahajanga Nanome ra maimaimpoana
Tafiditra ao anatin�ny fandaharan�asan�ny tanora antoko Tiako I Madagasikara ao Mahajanga ny fanampiana ara-tsosialy ny mpiarabelona.
Depiote Ravahimanana Guillaume Nisaotra ny vahoaka malagasy sy ny OIF
Amin�ny maha filohan�ny Vaomieran�ny Raharaham-bahiny eny amin�ny Antenimierampirenena azy dia maneho fisaorana ny vahoaka malagasy rehetra tsy an-kanavaka sy ny mpikambana eo anivon�ny OIF
Hisaona mialoha ny fotoana !
Malahelo aho ry Jean a ! Te hitomany ! Te hisaona mialoha ny fotoana mihitsy ka mba ho lasan�izay ny zava-doza mety hitranga aoriana
Kabarin�ny praiminisitra Kanadianina Fambara apokaliptika, hoy i Mailhol
Efa voambara ao amin�ny bokin�ny apokalipsy ny kabary toy ireny nataon�ny praiminisitra kanadianina Justin Trudeau tamin�ny frankofonia ireny, hoy ny pasitera Mailhol teny Isotry omaly.
Ambatondrazaka Nanomboka halina ny � couvre-feu �
Tsy azo ivezivezena ao Ambatondrazaka eo anelanelan�ny amin�ny 10 ora alina, ka hatramin�ny 4ora maraina.
Tan�nan�Antananarivo Ho ambohipihaonan�ireo Ben�ny tan�na aty amin�ny Oseanina Indianina
Handray ny fivoriamben�ireo Ben�ny tan�nan�ny tan�n-dehibe aty amin�ny ranomasimbe indianina ny tan�nan�Antananarivo.
BNI Madagascar Miala any indray ny �Pack Tanora�
Taorian�ireo mpiasam-panjakana sy ny ankizy madinika dia hanampy manokana ireo tanora manerana ny Nosy indray ny banky BNI Madagascar, indrindra fa ireo latsaky ny 25 taona.
Bekonazy � Bemanonga Hahazo tombontsoa amin�ny Ong Fanamby ny mponina
Vavahadin�i Menabe eo amin�ny resaka fizahantany ny �All�e des baobabs�. Ny taona 2007 no nitsiry ny hevitra hanaovana faritra arovana ny �All�e des baobabs�, niainga avy tamin�ny fanirian�ny Faritra Menabe mba hitandrovana ireo reniala maro ao.